DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Shuruudihii ugu adkaa abid ku xidhay Wadahadalka Soomaliya iyo Nooca Shuruudaha! & Xaalka oo sii… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Shuruudihii ugu adkaa abid ku...
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Shuruudihii ugu adkaa abid ku xidhay Wadahadalka Soomaliya iyo Nooca Shuruudaha! & Xaalka oo sii…
Hargeysa (Halqaran.com) – Shir ay yeesheen Golaha wasiirrada Xukuumadda Somaliland oo uu shir guddoominayay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa lagu sheegay in goluhu ay hoosta ka xarriiqeen in dib loo billaabo wadahadalka Somaliland iyo DF Soomaaliya, waxaana lagu xidhay shuruudo dhowr ah.
Sida ku xusan bayaanka Golaha Wasiirrada ayaa lagu gorfeeyay muhiimadda uu leeyahay wadahadalka labada dhinac, Waxaana shirkan lagu soo qaaday heshiisyadii ay labada garab horay ugu galeen kulamadii dhex maray, kuwaasoo Somaliland ay sheegtay “In dowladda Soomaaliya ay dhankeeda ka hirgalin weysay”.
In Somaliland ay diyaar u tahay in ay sii socdaan wadahadalada u dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya kana qabsoomaan goob dhexdhexaad ah yeeshaanna Ajendayaal cad-cad oo taabanaya arrimaha masiiriga ah, beesha caalamkuna dhexdhexaadiyaal (mediators) ka yihiin, sidoo kalena la helo damanaad-qaad (grantors) rasmi ah si aan dhinacna uga bixin wixii lagu heshiiyo.
In Soomaaliya ay qirto in Somaliland iyadoo dawlad madax-bannaan ah oo xoriyadeeda qaadatay 26-kii June 1960-kii ay la midawday Soomaaliya 1-dii Jully 1960 kii ayna kala ahaayeen laba dal oo kala gaar ah taariikh ahaan iyo maamul ahaanba, sidaa awgeedna wadahadalada laba dhinac ay noqdaan kuwo lagu-galo laba dawladood oo kala madax-bannaan.
XOG XASAASI: Odayaasha Cadaado oo kulan xasaasi ah isugu yimid, mowqifna ka qaatay shirweynaha Dhuusamareeb! (Ogow Wax badan?)
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Puntland ay wado qorshe culus oo ay ku soo xero gelineyso xubno ka tirsan Somaliland?!
XOG: Maxay tahay sababta ay Somaliland shaqaalaha badan shaqooyinka uga eriday?
In dhinaca Soomaaliya aanay wadahadalada u meteli karin shaqsiyaadka iyo siyaasiyiinta u dhashay Somaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya ama ka soo horjeeda dawladnimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland.
In beesha caalamku ay Somaliland ula dhaqanto dal madax-bannaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya, sidaa awgeed, waa in Safiirada iyo ergooyinka ka socda wadamada caalamka, madaxda ururada caalamiga ah iyo hay’adaha ka hawlgala gudaha Jamhuuriyadda Somaliland ay dhawraan Qarannimada Somaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Somaliland, waana in aanay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed, cireed iyo baddeed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Dhammaan qoraalada (documents) mashaariicaha ay hay’aduhu ka fulinayaan Somaliland waa in ay u isticmaalaan magaca, khariirada, astaanta iyo calanka Somaliland leedahay ee gaarka u ah, waxa reeban inaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland laga fulin Karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Somaliland, sidoo kale cidna ma fulin karto mashaariic aan ogolaanshahooda laga haysan hay’adda dawladdeed ay khusayso.
HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA IYO SHURUUDAHA ADAG:
wada hadallada Soomaaliya
Cali September 2, 2019 At 22:00
Kuwani waa daleen siday ulahayen hanala arkooy malinba waraaq ayay soo xarxariqan in aysan miir qabin warkooda 2 arin uunba ka fiiriyay waxay yirahden 1961 ka hor waxan aheyn dal madax banan kkk dalkas calanku lahay? Yaa madaxweyna ka ahay? Tan kale waxay yirahden dadka kasoo jeedo somaliland wada hadalka kama qayb gali karan horta yaa ah somaliland? Waa beesha isaaq yacni meeshaqabiilada la dago oo ay u dowladeyan uma ogolo in ay fikirkooda xata ka dhintan iskaba daay dowlada somaliya ayay ku amren xiligii xasan culusoow markasuu cabdikariin guled iyo shariif saki iyo mahadsalad ayaa waxay turikaga kula sheren hal dhinac oo isaaq ah loma ogolo dadkan aydulmiga iyo awooda u sheganayan walahi markan maqlo SNM waxan is irah maxaa iimanka kawada qaday mise aqli xumo ayay ka tahay dad ay gumastan 30 ayay leyihin xitaa dowlada somaliya soma raci kartaan mar dhow suga haday tani u meel marto dowalada group ka socdana isaaq halaga dhiga oo 2 dhanba aniga aan shirno si aan isku aqoo sano kkk
axmed September 3, 2019 At 13:03
Waxaas caruurtooda ayey ka dhaadhiciyaan, war ingiriis iyo cid kale toonii dowlad idiinma aqoonsan, habeen buu guurey, Barasaabkii Hargeysa joogey ee ingiriiska Xamar buu tegey 60 kii , isagoo yiri wax dowlad ah ee aan aqoonsanayee halkaa kasameyney ma jirto, Somaliya ayey doorteenin ayraacaan anaguna waa baxnay. waxay ay habeen iyo maali leeyihiin , 20 dowlo ayaa na aqoonsatey, iyo calan baan laheyn , waxba kama jiraan, waa dad aan xishooneyn ee waxaydoonaan ku hadlay.